Daafaca Kooxda Roma ku sugan ee Davide Zappacosta dib ugu soo laaban kara Chelsea kaddib markii… – Gool FM
Daafaca Kooxda Roma ku sugan ee Davide Zappacosta dib ugu soo laaban kara Chelsea kaddib markii…
(London) 05 Okt 2019. Davide Zappacosta ayaa dib ugu soo laaban kara Chelsea mustaqbalka dhow kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawac halis ah oo dhanka jilibka ah oo soo gaaray intii lagu guda jiray tababarkii uu la qaatay kooxda amaahda uu kula joogo ee Roma Jimcihii.
27-sano jirkaan ayaa heshiis gaaban ugu biiray Roma intii lagu guda jiray xagaagan, waxaana la filayaa inuu kooxda reer Talyaani la joogo illaa bisha Janaayo iyagoo khiyaar u haysta illaa dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Si kastaba ha haatee, sida uu warinayo Sky Italy, Zappacosta waxaa soo gaaray dhaawac u muuqday mid halis ah Jimcihii, taasoo la micno ah in daafaca uu ku laaban karo naadiga milkiyaddiisa iska leh si uu u bilaabo daweyntiisa.
Daafacan garabka midig kaasoo kooxda Roma u ciyaaray kaliya 12 daqiiqo xilli ciyaareedkan, isagoo sidoo kale dhaawac kubka ah uu soo gaaray bishii Sebtember kaasoo uu garoomada kaga maqnaa muddo bil ah.
Zappacosta ayaa 35 kulan u saftay kooxda Chelsea intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee Chelsea, laakiin xiddigan reer Talyaani ayaa ku dhibtooday inuu tallaabo qaado xilli ciyaareedkii hore – isagoo ka soo muuqday kaliya afar kulan oo horyaalka Premier League ah oo uu u ciyaaray Naadiga Blues.
Kooxda Real Madrid oo la ogaaday qiimaha ay suuqa xagaaga ku soo qaadanayso Goolhaye Jan Oblak
Rivaldo oo ku baaqay in keydka la dhigo Kabtanka Kooxda Barcelona ee Lionel Messi kulanka berri ee Sevilla... (Maxay tahay sababtu?)